11/01/12 ~ Myanmar Forward
မြစ်ကြီးနားမြို့ ဇေယျာမင်္ဂလာ ကျောင်းတိုက်၌ ဗုဒ္ဓဘိသေက မင်္ဂလာကျင်းပ
မြစ်ကြီးနား ၊ ၁-၁၁-၂၀၁၂
အများပြည်သူ ဖူးမျှော် ကြည်ညိုနိုင်ရန် မြစ်ကြီးနားမြို့ ၊ ယုဇန ရပ်ကွက် ၊ ဇေယျာမင်္ဂလာ ကျောင်းတိုက် အတွင်း တည်ဆောက် လျက်ရှိသည့် ဆုတောင်းပြည့် တာဝတိံသာ စေတီတော် မြတ်ကြီး၌ ကိန်းဝပ် စံပယ် တော်မူမည့် ရပ်တော်မူ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် ၄ ဆူ နှင့် ထိုင်တော်မူ ရုပ်ပွား ဆင်းတုတော် ၃၂ ဆူ အား တတိယ အကြိမ်မြောက် ဗုဒ္ဓဘသေက အနေကဇာတင်လှူ ပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနားကို အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်က အဆိုပါ ကျောင်းတိုက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ကျောင်းထိုင် ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ပညာဝံသ အမှူးပြုသော ပင့်သံဃာ ၄၅ ပါး ကြွရောက် တော်မူကာ ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာ ရေးရာအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အမှုဆောင်များ ၊ ဂေါပက အဖွဲ့ဝင်များ ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ နှင့် စေတနာရှင် အလှူရှင်များ ၊ ဖိတ်ကြား ထားသူများ တက်ရောက်ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယသမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားသား အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် (PERMANENT RESIDENCE SYSTEM) (PR) စနစ် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ ပထမအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်၍ အမှာစကား ပြောကြား
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ဆဲဥပဒေအရနှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံသားခံယူခွင့် (Dual Citizen) ကို ခွင့်ပြုထားခြင်း မရှိပါကြောင်း သို့ဖြစ်၍ နိုင်ငံခြားသား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ အသိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင်များ၊ ပြည်ပနိုင်ငံ များတွင် နိုင်ငံသားခံယူထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများက မိမိတို့နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အချိန်အ ခါကောင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ရင်းနှီး မြှုပ်နှံလိုကြသော်လည်း တည်ဆဲဥပဒေအရ နှစ်နိုင်ငံသား ခံယူခွင့် မရှိသည့်အတွက် အခက်အခဲများကြုံတွေ့ နေရပါကြောင်း၊ ယင်းကိုဖြေရှင်းနိုင်သည့် နည်းလမ်းကောင်း တစ်ရပ်မှာ အမြဲနေထိုင်ခွင့်စနစ်ပင် ဖြစ်ပါကြောင်း။
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး အနေဖြင့် ၎င်းတို့၏အကျိုး၊ နိုင်ငံတော်၏ အကျိုးကိုရှေးရှုပြီး အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် (PR) စနစ်ကိုချမှတ်ကျင့်သုံးရန် တိုက်တွန်းအားပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခုစနစ်အရ တစ်ဖက်နိုင်ငံသားဘဝကို စွန့်လွှတ်ရန် မလိုအပ်ဘဲမိမိတို့ နိုင်ငံ၌ ကာလအပိုင်းအခြား နေထိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များရရှိမည် ဖြစ်ပါကြောင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားသား အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် (Permanent Residence System) (PR) စနစ် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယသမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်း ကယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပ သည့် ယင်းကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။
တရုတ်ပြည်သို့ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နောင်ချိုမြို့နယ်ဆမ္မဆယ်ကျေးရွာမှတဆင့် ယခုလ အောက်တို ဘာ(၂၉)ရက်နေ့ မှ စ၍ ပြန်လည်တင်ပို့ရန်အတွက် နွားအကောင်ရေ(၅၀၀)ကျော်ဆမ္မဆယ်ကျေးရွာ၌ ရောက် ရှိနေကြောင်း ဒေသခံများထံက သိ ရှိရသည်။
အဆိုပါ နွားများမှာ ဆမ္မဆယ်ကျေးရွာအနောက်ရှိ တောင်နှစ်လုံးကြားတွင်ထားရှိကြောင်းကိုလည်း သိရသည်။ ယခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ လပိုင်း မှ စတင်ကာ ဆမ္မဆယ်မှတဆင့်တရုတ်ပြည်သို့ နေ့စဉ်နွားအကောင်ရေ(၁)ထောင် နီးပါးတင်ပို့နေပြီှး ယခုနှစ်စက်တင် ဘာလ အတွင်းတွင် နောင်ချိုရဲစခန်းမှ ဖမ်းဆီးမှုများကြောင့် ရပ်နားထားရာမှ ယခုလ (၂၉)ရက်နေ့တွင်ဆမ္မဆယ်ကျေးရွာအနောက် ဘက်တောင်ကြားထဲတွင် နွားအကောင်ရေ(၅၀၀)ကျော် ရောက်ရှိနေကြောင်း ဒေသခံများထံက သိရှိရသည်။
RCSS အမှတ် ၇ဝ၁ စစ်ဒေသ နှင့် ဒေသခံလူထု ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စဆွေးနွေး
အစိုးရနှင့် သျှမ်းပြည်တပ်မတော် (တောင်ပိုင်း) SSA (S) တို့ ပြုလုပ်ထားသော ငြိမ်းချမ်းရေးအပေါ် ပြည်သူ လူထု သဘော ထား သိရှိနိုင်ရန် SSA(S) လက်အောက်ခံ အမှတ် ၇၀၁ စစ်ဒေသက ဒေသခံလူထုအား ဖိတ်ကြားကာ ယခုလ ၂၈ ရက်နေ့က ဆွေးနွေးပွဲ တစ်ရပ် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အမှတ် ၇ဝ၁ စစ်ဒေသ အခြေစိုက်ရာ သျှမ်းပြည် (မြောက်ပိုင်း) မူစယ်ခရိုင် မန့်ဟျိုး(မန့်ဟီးရိုး)မြို့ နယ်ခွဲ အတွင်း ရှိ နောင်မ ကျေးရွာ၌ အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တပ်မှူးဖြုတ်ရွှေ့မှုကြောင့် ဝ နယ် ဟိုင်းဝေးလမ်း စီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းထားရ
အင်အားကြီးတပ်မဟာတခု၏ တပ်မှူးအား အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်သည့် နောက်ပိုင်းတနှစ်ခန့် တည် ဆောက်လာသည့် ၀ နယ်အတွင်း အဓိက ဟိုင်းဝေးကြီးလမ်းတခု ရပ်ဆိုင်းထားရကြောင်းနီးစပ်သည့် အသိုင်းအဝိုင်း ကပြောပါသည်။
“တပ်မှူးအိုက်ဆုကို အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကိုပို့လိုက်တာ ဩဂတ်စ်လတုန်းကလေ။ ဖေါက်လုပ်နေဆဲ ၄လမ်းသွား လမ်းမကြီး က ၁၀ ကီလိုမီတာလောက်ဘဲပြီးသေးတာ။ အခုရပ်ကုန်ပြီ။ ခန့်မှန်းအရှည်က ၂၀၀ ကီလို မီ တာပေါ့။ အခုဆောက်လုပ် ရေးကားတွေလဲ ပန်ဆန်းဘက် အကုန်ယူသွားပြီ” - ဟု အမည် မဖေါ်လိုသည့် ဝ အရာရှိတဦးက ပြောပါသည်။
မင်းမဲ့စရိုက် ဆန်ဆန် ပြိုင်ကား ၄ စီးနဲ့ စုပြီး ကားတစ်စီး ကို ၀ိုင်းရိုက်မှုဖြစ်ပွါး
ဒီနေ့ နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ မနက် ၁း၀၀ ခန့်အချိန်တွင် ရန်ကုန် အင်းစိန်လမ်းမ၊ စံရိပ်ငြိမ် မှတ်တိုင်း အနီး။ Excellent studio ၌ လူစုဖွဲ့ ရမ်းကားမှု တစ်ရပ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြိုင်ကား ၄ စီးနဲ့ စုပြီး ကားတစ်စီးကို ဝိုင်းရိုက်ပါတယ်။ အထဲမှာပါတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ အော်သံက အင်မတန်ကြေကွဲဖွယ်ပါပဲ။ တုတ်တွေနဲ့ရိုက် ကားမှန်တွေ ခွဲ၊ သိပ်ကို တုန်လှုပ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
သွေးထိုးလှုံ့ ဆော်သူ-ဧရာဝတီ အောင်ဇော်ကိုသာပထမအရေးယူရန်လိုတယ်
Posted by drmyochit Thursday, November 01, 2012, under ဆောင်းပါး | No comments
(ဆောင်းပါးနှင့်ပတ်သက်၍အာဘော်သည် ဆောင်းပါးရှင်၏ အာဘော်သာဖြစ်ပြီး RSV အယ်ဒီတာအဖွဲ့မှ စာကြောင်း၊ စာသားများအား လုံးဝပြုပြင်ပြောင်းလဲထားခြင်းမရှိပဲ ဆောင်းပါးရှင်မှ ပေးပို့လာသည့် မူရင်းစာ အတိုင်းဖော်ပြပေး ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပေးပို့တဲ့ ဆောင်းပါး...ရှင် ကျော်ခဏ်းနွယ်အားကျေးဇူး တင်ရှိပါ သည်။
နိုင်ငံတော်ကရခိုင်အရေးနှင့်ပါတ်သက်၍ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်သူများနှင့် နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင် သူများကို ဖမ်းဆီး အရေးယူ တော့မည် ဆိုသော ကြေညာချက် သတင်းထွက်ပေါ်လာသည်။ သို့ အတွက်ကြောင့် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ မည်သူက ကြိုးကိုင်နေကြသည်၊ မည်သူကသွေးထိုးလှုံ့ ဆော်နေ သည်ကို လေ့လာ ကြည့်လျှင် ရှေးဦးစွာ ပြည်ပမှ ဧရာဝတီ အယ်ဒီတာအောင်ဇေါ်ကိုတွေ့ ရမည်ဖြစ်သည် ။ ယခုလောလော ဆယ်ပင် ရခိုင်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ နိမိတ်ဆိုးဆိုသောဆောင်းပါးကိုရေးသားဖေါ်ပြပြန်ရာ ၄င်းဆောင်းပါး သည် တည်ငြိမ်စပြုနေပြီဖြစ်သော ရခိုင်ပြည် နယ် ပဋိပက္ခကိုဆက်လက်ကြီးထွားစေရန်အတွက် လောင် စာကြီး တခုဖြစ်နေသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် နိုင်ငံတော် ၏ ဆောင်ရွက်နေသော စီမံချက်များ ကိုလည်း အားမနာပ စော်ကားခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာ အစိုးရနှင့် ကေအိုင်အေတို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေး ပွဲ ပြုလုပ်သည့် အောက်တိုဘာ ၃ဝ ရက်နေ့
နေ့လည် ၁ နာရီခွဲ တွင် ဖားကန့် မြို.နယ် ဆိုင်းတောင် နှင့် ကံမခံ အသွားကား လမ်း ပေါ်တွင် နှစ်ဖက် ပစ်ခတ်မှု များကြောင့် ခရီးသွား ဗင်ကား တစ်စီးပေါ်မှ လူနှစ်ဦး သေဆုံးပြီး သုံးဦး ဒဏ်ရာ ရခဲ့ကြောင်း ဒေသခံ တစ်ဦးက The Voice Weekly သို့ ပြောကြားသည်။
(ဓါက်ပုံ)ကချင်စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် စခန်းများ
သေဆုံးသူ များမှာ အသက် (၂၂)နှစ် အရွယ် အမျိုးသား တစ်ဦးနှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဦးတို့ ဖြစ်ကြောင်း၊ အမျိုး သမီးမှာ ဖားကန်ဆေးရုံမှ ဆင်းလာသူဖြစ်ပြီး ၊ဒဏ်ရာရသူ များမှာ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးနှင့် ယာဉ်မောင်း အမျိုးသား တစ်ဦး တို့ ဖြစ်ကြောင်း၊ ၄င်းတို့ကို ဖားကန့် ဆေးရုံသို့ ပို့ ထားကြောင်း ၄င်းက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
လတ်တလောဖြစ်ပွားနေသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း မတည်ငြိမ်မှု များကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် နေရသူများအတွက် အရေးပေါ် အကူအညီများ လိုအပ်လျက်ရှိ ကြောင်း ဒုက္ခသည်များနှင့် အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းများက ပြောသည်။ အထူးသဖြင့် ကလေးသူ ငယ်များနှင့် အမျိုးသမီးများအ တွက် အကူအညီများ လိုအပ် လျက်ရှိကြောင်း ၎င်းင်းတို့ကပြော သည်။ ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်များအ တွင်း နေအိမ်များ မီးလောင်ဆုံး ရှုံးမှုများကြောင့် မည်သည့်ပစ္စည်း မှ မကျန်အောင် ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ် ပွားခဲ့ကြောင်း ထွက်ပြေးတိမ်း ရှောင်လာခဲ့သူများကပြောသည်။ ''အ၀တ်တစ်ထည်၊ ကိုယ် တစ်ခုနဲ့ ပြေးလာရတာဆိုတော့ လိုတာကအားလုံးပဲ။ လောလော ဆယ်တော့ ဆန်လှူတဲ့သူရှိပေ မယ့် ဟင်းစားအတွက် အခက်အ ခဲရှိတယ်။ အ၀တ်အစားလည်း လို တယ်"ဟု မြောက်ဦးမြို့ အလို တော်ပြည့်ကျောင်းဆရာတော်က မိန့်ကြားသည်။ မြောက်ဦးမြို့တွင် မတည် ငြိမ်မှုများကြောင့် အောက်တိုဘာ၂၂ ရက်က ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် လာသည့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ၈၀၀ခန့်ကို အလိုတော်ပြည့် ကျောင်းအတွင်း စောင့်ရှောက်ထားသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ အများစုမှာ ကလေးသူငယ်များနှင့် အမျိုးသမီးများ ဖြစ်ကြောင်း စာရင်းများအရ သိရသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလနှင့် ဇွန်လများအတွင်း ပထမတစ်ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မတည်ငြိမ်မှုများကြောင့် ပြောင်း ရွှေ့နေထိုင်ရသည့် ဒုက္ခသည်များ အားလည်း ပြန်လည်နေရာချထား မှုများ မပြုလုပ်နိုင်သေးဘဲ ဒုက္ခသည်စခန်းများအတွင်းတွင်သာ နေထိုင်လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင်လည်း အစိုးရအစီအစဉ် အကူအညီဖြင့် ထောက်ပံ့မှုများကို အဓိကထားပြီး ရပ်တည်နေရသည်။ ''အခုက စပါးရိတ်ချိန်လေ။ စိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်း ပြဿနာ ဖြစ်လို့ ဒုက္ခရောက်တယ်။ ရိတ်တဲ့ အချိန်ကျတော့လည်း ပြဿနာ ဖြစ်တယ်။ ၀မ်းစာတောင်စိုးရိမ် နေရတယ်"ဟု ကျောက်တော်မြို့ နယ်အတွင်းမှ ဒေသခံတောင်သူ ကပြောသည်။ ဒုက္ခသည်များက လတ်တ လောတွင် စေတနာရှင်များနှင့် အ စိုးရ၏အစီအစဉ်ဖြင့် ထောက်ပံ့မှု များဖြင့် ရပ်တည်နေရသော်လည်း ရေရှည်တွင် အခက်အခဲကြုံတွေ့ နိုင်ကြောင်းပြောသည်။ ''သောက်ရေသန့်တွေ အဓိ ကလိုတယ်။ စားဖို့အတွက် ဝေ ပေမယ့် ခြိုးခြံပြီးစားရတယ်"ဟု ဘောဒူဗဒုက္ခသည်စခန်းမှ ဦးမောင်အေးမောင်ကပြောသည်။ ဒုက္ခသည်စခန်းများအတွင်း အညစ်အကြေးစွန့်ရန်အတွက် အိမ်သာများ ထားရှိပေးထားသော် လည်း အိမ်သာဖြင့် အညစ်အ ကြေးစွန့်ပစ်လေ့မရှိသည့် ဓလေ့ များကြောင့် ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါများဖြစ်ပွားမည်ကို စိုးရိမ် လျက်ရှိကြသည်။ ဒုက္ခသည်များအား အကူ အညီပေးနေသော ကုလသမဂ္ဂ လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများ ၏အဆိုအရ နေရာပေါင်းစုံမှ ဒုက္ခသည်များထံ အကူအညီများ ရောက်ရန် အခက်အခဲများစွာရှိ ကြောင်းလည်း သတင်းရရှိသည်။ မတည်ငြိမ်မှုများကြောင့် မီး လောင်မှုများအတွင်း ဆုံးရှုံးခဲ့ရာ တွင် ပစ္စည်းဥစ္စာအားလုံးနီးပါး ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း၊ ပြန်လည်ထူ ထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ် ဆောင်ရာတွင် နေအိမ်အဆောက် အအုံများအပြင် အားလုံးလိုအပ် လျက်ရှိကြောင်း ဒုက္ခသည်များက ပြောသည်။
စစ်တွေရှိ တပ်များမှာ ပြည်ထောင်စုတပ်များ မဟုတ်ဟု ပြည်နယ် ပြန်ကြားရေးက ရှင်း
ဘူးသီးတောင်တပ်ရင်းမှစစ်တွေမြို့၌ လုံခြုံရေးရယူရန် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် တပ်ရင်းများ ရောက်ရှိနေသည်။ စစ်တွေမြို့တွင် လုံခြုံရေးထပ်မံတိုးမြင့်ချထားရန် ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ် သည်ဟု ဒေသခံများထံက သိရသည်။ အထက်ပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ “တချို့သတင်းတွေက ထွက်နေတယ်၊ ပြည်ထောင်စုက လာတဲ့တပ်တွေ ဆိုပြီးတော့ အဲဒါ မဟုတ်ပါဘူး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးသီးတောင်မောင်တောက တပ်တွေပါ”ဟု ရခိုင်ပြည်နယ် သတင်း ပြန်ကြားရေးနှင့် မှတ်တမ်းစုဆောင်းရေးဆပ်ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးဦးဝင်းမြိုင် က ပြောသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တည်ငြိမ်နေပြီဖြစ်သော်လည်း ရခိုင်နှင့် ဘင်္ဂလီ ဒုက္ခသည်များ စစ်တွေမြို့သို့ ရောက်ရှိလာနေဆဲဖြစ်သည်။ “သဲခုံက ရခိုင်ဒုက္ခသည်တွေစစ်တွေမြို့ရွှေစေတီကျောင်းမှာ ရောက်နေကြ တယ်”ဟု ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။ အလားတူ ပေါက်တောမြို့မှ ဘင်္ဂလီဒုက္ခသည်များမှာလည်း စစ်တွေမြို့ ဘာဆာရာ(အုန်းတော) ပင်လယ်ကမ်းခြေတွင်ရောက် ရှိနေကြောင်း သိရသည်။ တာဝန်ကျ ရဲတစ်ဦး၏ အဆိုအရ ဘင်္ဂလီများသည် စက်လှေများဖြင့် စစ်တွေသို့ ရောက်ရှိ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ၄င်းတို့၏ ပြောဆိုမှု အရသိရသည်။
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး-ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ(၇) ထိန်းချုပ်နယ်မြေ သူးမွဲမြစ် (သောင်ရင်းမြစ်) အတွင်း ယမန်နေ့ ညနေ(၅)နာရီခွဲအချိန်၌ လှေနစ်မြှုပ်မှု တခုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ လှေပေါ်ပါလာသူထဲမှ ဗိုလ်မှူး အဆင့်ရှိသူ KNLA တပ်မှူးတစ်ဦး ပျောက်ဆုံး လျှက် ရှိသည်ဟု သိရသည်။
ပျောက်ဆုံးသွားသူမှာ ၅၅နှစ်အရွယ် ဗိုလ်မှူးစောရိုး(စောကီးဒို့)ဖြစ်ပြီး ထိုင်းဘက်ကမ်းရှိ အသိ တယောက် ထံသို့ အလည်သွားပြီး G-3 ဗိုလ်မှူးစောဆဲ ဂေ၀ါးသော၊ ဗိုလ်မှူးစောတာမလာတို့နှင့်အတူ လှော်လှေဖြင့်ပြန်လည်လှော်ခတ် လာရာ သေဘေထာ့ကမ်းနံ ဘေး ရောက်ခါနီး ရေစီးသန်သည့် နေရာတခု အရောက်တွင် လှေတိမ်းမှောက် သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျောက်နီးမော်ပြဿ နာတွင် ဦးဆောင် သူဟု စွပ်စွဲကာ ရွာသား ၅ ဦးအားဖမ်း ဆီးရန် ကြိုး စားနေကြောင်း သိရ သည်။ အဆိုပါရွာသား ၅ ဦးသည် ဦးဆောင်သူများ၊ ကြိုးကိုင် သူများ မဟုတ် သဖြင့် အဖမ်း မခံဘဲ ထွက်ပြေးနေရ ခြင်းဖြစ် ကြောင်းလည်း ဒေသခံများ ပြောပါသည်။
ကျောက်နီမော်တွင် သေဆုံး သူအား သဂြို င်္လ်ရန် အခက်ကြုံနေ ရကြောင်း သိရသည်။ ရခိုင်တိုင်း ရင်း သားများ သဂြိ င်္လ်သော သုဿာန်မှာ ဘင်္ဂလီရွာနှင့်လွန်စွာနီး ကပ်နေ သဖြင့် ဆိုပါသု သာန်တွင် သဂြိုလ်ရန် တာဝန်ရှိ သူများက ခွင့်ပြု ချက်မပေးကြောင်း သိရသည်။ သေဆုံးသူ မောင်ဟန်ရွှေ (ရေမျက်ဝကျေးရွာ)၏ အလောင်း အား ဒေသခံများ က ကျောက်နီမော်ရွာ ၌ပင် သဂြို င်္လ်ရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်း လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ကလက်မ ခံသဖြင့် အခက်တွေ့ နေရကြောင်း၊ အလောင်းအား အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ထိ ကျောက်နီမော်ဆေးရုံ၏ ရင်ခွဲ ရုံတွင် ထားရှိဆဲဖြစ်ကြောင်း လည်းသိရသည်။ ယခုအခါ ကျောက်နီမော် တွင်လုံခြုံရေး အပြည့် အ၀ ချထားပြီး ဘင်္ဂ လီများ နှင့်ပြဿ နာထပ် မဖြစ်အောင် တင်းကြပ် စွာစီ စဉ် ထားကြောင်း လည်းသိရသည်။
တကျော့ပြန် ရခိုင်ပြည် ပဋိပက္ခ တွင် နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်သော လူပုဂ္ဂိုလ် နှင့် အဖွဲ့ အစည်း များကို ဖော်ထုတ် တွေ့ရှိ
တကျော့ပြန် ဖြစ်ပွားလာသောရခိုင် ပြည်နယ် ပဋိပက္ခ တွင် လူစုလူဝေးဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ အကြမ်း ဖက်ခြင်း၊ တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ မီးရှို့ ဖျက်ဆီး ခြင်း ကိစ္စများတွင် တစ်ဖက် အဖွဲ့အစည်း မှာ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အသေးစိတ် စီစဉ်ခြင်း၊ ဒေသန္တရ လုပ် လက်နက် များဖြင့် အချိန်ကိုက် ပူးပေါင်း လှုပ်ရှားဆောင်ရွက် ခြင်းများ တွေ့ရှိ ရသည့် အပြင်၊ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့ အစည်း နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးယူထားသော အဖွဲ့အစည်း များပါ ပါဝင်ပတ်သက်မှု ရှိနေ သကဲ့သို့၊ အခြား တစ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းမှလည်း အချို့သော ပြည်တွင်း ပြည်ပ အဖွဲ့ အစည်းများ ပါဝင် ပတ်သက် နေသည့် အထောက် အထား များကို တွေ့ရှိ ရကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတ ရုံးက ယနေ့ည ၈နာရီတွင် သတင်းထုတ်ပြန် လိုက်သည်။
နန်းခင်ဇေယျာ စင်ရော်မောင်မောင်နှင့် ကြော်ငြာ စတင်ရိုက်ကူး
Miss Myanmar နန်းခင်ဇေယျာသည် လွယ်ဟိန်းကုမ္ပဏီ၏ Brand Ambassador အဖြစ်စာချုပ်ချုပ် ဆိုပြီးနောက် ယနေ့(အောက်တိုဘာ ၃၁)တွင် ဒါရိုက်တာ စင်ရော်မောင်မောင်နှင့် Blue Mountain ကြော်ငြာရိုက် ကူးနေကြောင်း နန်းခင်ဇေယျာ၏မန်နေဂျာ ဖြစ်သူက The Voice Weeklyသို့ပြောကြားသည်။
“လွယ်ဟိန်းနဲ့က တစ်နှစ်စာချုပ် ချုပ်ထားတာပါ။တစ်ခြား ကမ်းလှမ်းလာ တာတွေတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လွယ်ဟိန်းကုမ္ပဏီ တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲစာချုပ် ချုပ်ရပါသေးတယ်။”ဟု၎င်းက ပြောကြားသည်။ နန်းခင်ဇေယျာအား လွယ်ဟိန်းကုမ္ပဏီ၏ Brand Ambassador အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း သဘောတူ စာချုပ်ချုပ် ဆိုပွဲအခမ်းအနားကို (အောက်တိုဘာလ၂၆) နံနက် ၁ဝ နာရီက လွယ်ဟိန်း ကုမ္ပဏီရုံးခန်းတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
လင်မယား စကားများ ရာ မှ လူအသေအပျောက် ရှိသည့်ထိ ရခိုင် ပြည်နယ် မငြိမ်သက် မှု ဖြစ်ပွား
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တစ်ကျော့ပြန် လည်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခများကို လက်ရှိအချိန်တွင် ပြန်လည် တည်ငြိမ်မှုရရှိအောင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီဖြစ် ကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှ ပြောရေးဆို ခွင့်ရှိသူ ကပြောသည်။
လုံခြုံရေးအင်အားကို တိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး ယခင်တပ်မတော်တပ်ရင်း ၂၈ ရင်းရှိရာမှ ၅၁ ရင်းအထိ တိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ အင်အား ၅၀၀၀ ကျော်၊ နစကတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား၁၀၀၀ ကျော် ချထားခဲ့သည်။ သွေးထွက်သံယိုမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အဆိုပါဒေသများကို လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင် များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ သွားရောက်ကာ အခြေအနေများ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ထပ်မံဖြစ်ပွားမှု မရှိစေရန် အတွက် ဖြစ်ပွားနိုင်သည်ဟု ယူဆရသော နေရာများတွင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ ချထားခြင်းများ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးနှင့် မှတ်တမ်းပြုစုရေးဆပ်ကော်မတီ အတွင်း ရေးမှူးဦးဝင်းမြိုင်ကပြောသည်။
ဗလီတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့် ကော့ကရိတ်မြို့တွင် လုံခြုံရေး တင်းကြပ်ထား
ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ်မြို့ တံတား ဦးရပ်ကွက်ရှိ ရေနံဆီကုန်းဗလီကို အောက်တိုဘာလ ၂၈ရက်နေ့ညက အမည်မသိ ဆိုင်ကယ် သမားနှစ်ဦးမှ လက်ပစ်ဗုံးဖြင့် ဝင်ရောက် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လုံခြုံရေး တင်းကြပ် ထားရ သည်ဟု ကော့ကရိတ်မြို့ကြံ့ခိုင် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်တစ်ဦးက ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
“ကော့ကရိတ်မှာ ရပ်ကွက် ၇ခုစလုံး ရဲက လုံခြုံရေးတွေ စောင့်ကြတယ်။ ဗလီမှာဆိုလည်း ဗလီ လုံခြုံရေး ပေါ့။ နောက် ဒီလိုမျိုး ပြဿနာ မပြန့်ပွားအောင် ကာကွယ်ထားတဲ့အနေနဲ့ပါ”ဟု သူက ဆိုသည်။ ၎င်းမွတ်ဆလင်ဗလီကျောင်း လက်ပစ်ဗုံးနှင့် တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ မရှိသော်လည်း ၎င်းလုပ်ရပ်သည် ကရင်လူမျိုး အများစုကြား နေထိုင်နေသည့် မွတ်ဆလင်မ်နှင့် သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပေး သည့် သဘောဖြစ်သည်ဟု ကော့ကရိတ်မြို့ မှ ရပ်ကွက်လူကြီးတစ်ဦးက ပြောဆိုသည်။
ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံရှိ မိမိနေအိမ်သို့ ရခိုင်ပြည်မှ ပြန်လည်လာရောက်နေ ထိုင်မည့် ဘင်္ဂလီများအား လက်ရှိ အာဏာရပါတီမှ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးက ကိုယ့်အိမ်ကို မီးရှို့သူနှင့် အကြမ်းဖက်သမားများကို လက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်း ထုတ်ဖေါ် ပြောဆို လိုက်ပြီး နယ်စပ်တစ်လျှောက် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များကို တင်းကျပ်စွာ ချထား လျှက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ရခိုင်ပြည်မှ စက်လှေများဖြင့် ထွက်ခွာသွားပြီး ဘင်္ဂလာသို့ ၀င်ရောက်ရန် ကြိုးပမ်းနေကြသော ဘင်္ဂလီ မူဆလင်များ နှင့်ပတ်သက်၍ ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံသားများအား Arakantimes မှမေးမြန်းရာ " ဘင်္ဂလာက အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် မိုဟာဘု အာလောင်ဟာနို့ က " ကိုယ့်အိမ်ကို မီရှို့သူတွေနဲ့ အကြမ်းဖက်သူတွေကို ဘင်္ဂလာက လက်ခံဖို့ လုံးဝနေရာမရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်၊"
ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံမှ မလေးရှားသို့ တရားမဝင် ဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် သွားသောစက်လှေတစ်စီး ဘင်္ဂလားပင်လယ်ပြင်တွင် တနင်္ဂနွေနေ့က နစ်မြှုပ် သွားခဲ့သဖြင့် (၁၂၈)ဦးအနက် (၁၂၂)ဦး ပျောက်ဆုံး နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ယင်းမလေးသွား မှောင်ခိုစက်ဘုတ်မှာ ဘင်္ဂလာ ကော့စ်ဘဇားခရိုင် တာခ်နာမြို့နယ် ဆာဟ်ပေါ်ရီရ် ကျွန်းမှ တနင်္ဂနွေနေ့က စတင် ထွက်ခွာသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပင်လယ်ပြင်တွင် ကျောက်ဆောင်ကို တိုက်မိ၍ နစ်မြှုပ်သွားခြင်းဖြစ်သည်ဟု အသက်ရှင်လာသူ(၆) ဦးတို့မှ အတည်ပြုပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ယခုထက် အခြေအနေ ပိုမို ဆိုးရွားလာပါက စစ်အုပ် ချုပ်ရေး ကြေညာနိုင်ဖွယ်ရှိပြီး စစ်အုပ် ချုပ်ရေးကို ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ အနေဖြင့် လိုလားမှုမရှိကြောင်း ရခိုင် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင် အချို့က ပြောသည်။
ရခိုင်အရေးအခင်းဟာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ ရဲ့ အရေးမဟုက်ဘဲ မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံး ရဲ့ အရေး ဖြစ်ကြောင်း အရှင် ဉီးဝီရသူ ပြောဆို(ရုပ်သံ)
Posted by drmyochit Thursday, November 01, 2012, under ဗွီဒီယိုသတင်း | No comments
ဒီကနေ့အရှင်ဦးဝီရသူက ရခိုင်အရေး အခင်းဟာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ ရဲ့ အရေး တစ်ခုတည်းမဟုတ်တဲ့ 
အကြောင်းမြန်မာတစ်မျိုးသားလုံး ရဲ့ အရေးဖြစ်ကြောင်း"ဘင်္ဂလီတွေ့ ရဲ့နောက်မှာ အာရပ် ကမ္ဘာရှိတဲ့ အကြောင်း သူတို့နောက် က ထောက်ပံ ပေးနေတဲ့ အကြောင်းပြောဆို ထားပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ ရခိုင်အရေး အခင်းဟာ လူမျိုးရေ ပတိ ပက္ခ မဟုက်ပဲ" ဂျိူးဟက် "ကျူးကျော် စစ်ပွဲ ဆင်နွဲခြင်း ဖြစ် ကြောင်းဟု အရှင် ဉီးဝီရသူ ပြောဆိုဟောပြထားပါတယ်။
ဘွဲ့လက်မှတ်တုနဲ့ အလုပ်လျှောက်ထားသူ မြန်မာတဦး စင်ကာပူတွင် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရ
စင်ကာပူနိုင်ငံ လူသားစွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန (The Ministry of Manpower -MOM) က အသက် ၂၈ နှစ်ရှိ မြန်မာ နိုင်ငံသား ကိုကျော်စွာဝင်း ဆိုသူဟာ သတင်းအချက်အလက်မှားယွင်းစွာ ဖော်ပြမှု၊ ဘွဲ့လက်မှတ် အတုနဲ့ အလုပ်အကိုင်ရရှိရေး ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် ထောင်ဒဏ် အမိန့် ချမှတ်လိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဘင်္ဂါလီမူဆလင်လွှတ်တော်အမတ် ဦးရွှေမောင်နှင့် ရခိုင်ပညာတတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးတို့ပြောဆိုချေပမှု
နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေး အတွက် စေ့စပ်ဆွေးနွေးပွဲမှာ ဘင်္ဂါလီမူဆလင်လွှတ်တော်အမတ် ဦးရွှေမောင်နှင့် ရခိုင်ပညာတတ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးတို့ မီဒီယာများရှေ့၊ တူရကီ သံအမတ်ကြီးရှေ့၊ မြန်မာအစိုးရခေါင်းဆောင်များရှေ့တွင် အပြန်အလှန်ပြောဆိုဖြစ် ခဲ့သော စကားများ ထဲမှ တစ်ခုသော ပြောဆို ချေပမှု တစ်ခုကို ရွှေမြန်မာ မီဒီယာဂရုမှ တင်ပြလိုက် ပါတယ်။
ဘင်္ဂါလီမူဆလင်လွှတ်တော်အမတ် ဦးရွှေမောင်။ ။အစပိုင်းတုန်းက အမေရိကတိုက် ဆိုတာ ရက်အင်ဒီး ယန်း တွေပဲရှိနေခဲ့တာ။ နောက်ပိုင်းကျမှ အင်္ဂလိပ်တွေ အမေရိကတိုက်ကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပဲ။ ဘယ်သူတွေက အင်္ဂလိပ်တွေကို ကျူးကျော်သူတွေလို့ ပြောကြလဲ။ အခုလည်း ဒီအတိုင်းပေါ့။ ရခိုင်ပြည်ရဲ့ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောနယ်မှာ အရင်က ရခိုင်တွေရှိနေခဲ့တယ် ဆိုပေမယ့် အခု ကျုပ်တို့ မူဆလင်တွေရှိနေပြီ။ ကဲ- အဲဒီတော့ အဲဒီမြို့နယ်တွေကို အခုဘယ်သူပိုင်သင့်ပြီလဲ။ ခင်ဗျားတို့ တွေစဉ်း စားတော့။
ရခိုင်ပညာတတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး။ ။အမေရိကန်အခြေအနေနဲ့ အခုရခိုင်ပြည်အခြေ အနေနဲ့ လုံးဝမတူ ပါဘူး။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ အဲဒီခေတ်အခါက ရှိနေခဲ့တဲ့ ရက်အင်ဒီးယန်း တွေဟာ ခိုင်မာတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ခိုင်မာတဲ့ ဘာသာတရားမရှိခဲ့ပါဘူး။ ခိုင်မာတဲ့ အုပ်ချုပ်မှု အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုမရှိခဲ့ ပါဘူး။ လုံလောက်တဲ့အသိဥာဏ်ပညာဆိုတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီတော့ အင်္ဂလိပ်တွေ အမေရိကန်နိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်လိုက်တာဟာ သူတို့ ရက်အင်ဒီးယန်းလူရိုင်းတွေကို လူယဉ်ကျေး ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးတဲ့အတွက် သူတို့တွေရဲ့ ကျေးဇူးရှင်တွေလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။ အခုရခိုင်ပြည်မှာက ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အုပ်ချုပ်မှုတွေ၊ အုပ်ချုပ်သူတွေ ခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေတယ်။
ဘင်္ဂါလီမူဆလင်တွေဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှ ရခိုင်ပြည်ထဲသို့ ခိုးဝင်လာသူ တွေဖြစ်ကြောင်း ကျွန်မတို့မှာ အထောက်အထား အပြည့်အစုံ ရှိပါတယ်။ သူတို့တွေကို ကြည့်လိုက်ရင် လည်း အလိမ်အညာတွေဗရပွနဲ့ ကမ္ဘာကို ပရိယာယ်ကြွယ်ကြွယ်နဲ့ ငိုပြကြတယ်။ ရက်စက်ကြမ်းတမ်းစွာ ဒေသခံတွေကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြတာ ငြင်းမရနိုင်တဲ့အချက်ပါ။
အဲဒီလိုအန္တရာယ်တွေ၊ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကို ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုလာကြတဲ့အခါ ဒေသခံ ရခိုင်တွေကလည်း အသက်ဘေးစိုးရိမ်ကြတဲ့အတွက် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောနယ်တွေ က ထွက်ပြေးကြတယ်။ အဲဒီလို သူတို့တွေကို ကြောက်ပြီးထွက်ပြေးသွားအောင် အကွက်ချပြီးလုပ်ကြတာကို။ အဲဒီတော့ ဘင်္ဂါလီတွေကို ဘူးသီးတောင်၊မောင်တောနယ်တွေကို ပေးဖို့ ဆိုတာကတော့ လုံးဝကို မဖြစ်နိုင်တဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုလိုပါပဲ။ ကျွန်မပြောချင်တာ ဒါပါပဲ။
မျိူးရန်နှိုင် ပို့ ပေးသည်။
နိုင်ငံတော် အစိုးရနဲ့ KIO အဖွဲ့တို့ အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်နေ့က တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့မှာ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကြမယ် ဆိုတော့ ၀မ်းသာမဆုံး ဖြစ်ရတယ်။ ရှေ့မှာလည်း ငြိမ်းချမ်းရေး တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့တာ (၁၀)ကြိမ် ရှိပြီဆိုတော့ အခု ကျင်းပတဲ့ ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲက အကျိုးကျေးဇူးတော့ များလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည် ခဲ့ပါတယ်။
ကချင် တိုင်းရင်းသား ဒေသခံတွေ အပြင် နိုင်ငံတော် တစ်ဝန်းလုံးက လူတွေတောင်မှ ဒီတွေ့ဆုံပွဲကို စိတ်ဝင်တစား နားစွင့် ခဲ့ကြတဲ့ အထိပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး တွေ့ဆုံပြီး သဘောတူ စာချုပ်တွေ ချုပ်ဆို ၊ ပြုံးချိုချိုနဲ့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက် နေကြတဲ့ ပုံကို မြင်ချင် လှပါပြီ။ ငြိမ်းချမ်းရေး တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ပွဲ အောင်မြင်ဖို့က KIO အဖွဲ့ပဲ ကျန်တော့တယ် ထင်ပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ် ကြီးကို သေနတ်သံ ၊ ဗုံးသံ ၊ အမြောက်သံတွေ ကင်းစင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းသော ပြည်နယ် အဖြစ် ဖြစ်စေချင် လှပါပြီ။ နိုင်ငံတော် သမ္မတကလည်း မီဒီယာ တွေ့ဆုံပွဲမှာ " ကချင်ပြည်နယ်ကို ငြိမ်းချမ်းရေး အလွန်ပဲ ရစေချင် ပါတယ် ..။ နှစ်ဖက် ဆုံးရှုံးမှုက တိုင်းပြည်ရဲ့ ဆုံးရှုံးမှုပါ။ KIO စစ်သား တစ်ယောက် ဆုံးရှုံး သွားတာဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်သလို ၊ ဗမာစစ်သား တစ်ယောက် ဆုံးရှုံး သွားတာလည်းတိုင်းပြည်ရဲ့ ဆုံးရှုံးမှု ပါပဲ .... " လို့ ပြော သွားတယ်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒဟာ တစ်သားတည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲကြီး အောင်မြင် ပါစေလို့ ဆုတောင်း နေမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆုတောင်း မပြည့်ခဲ့ပါဘူး။ " တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ မအောင်မြင်ဘူး " ဆိုတဲ့ သဘောတူ ညီချက် တစ်ခု တလေ တောင် မှ မရခဲ့ဘူးတဲ့။
ဘယ်လို ဖြစ်ရတာပါလိမ့် ..... ?
စုံစမ်းကြည့်မိတော့ KIO ဘက်က အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ကို နောက်မှ လုပ်မယ် ၊ နိုင်ငံရေး အရ ဆွေးနွေးမှုကို အရင်ဆုံး လုပ်မယ် ဆိုတဲ့ ကောက်ကြောင်း ဟောင်းပါပဲ။ အစိုးရဘက်က နယ်မြေ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကို ပထမ ဦးစားပေး လုပ်မယ် ၊ အဲဒီကမှ နိုင်ငံရေးအရ ဆက်လက် ဆွေးနွေးသွား ချင်တယ်လို့ သိရတယ်။
ဘယ်သူ့ဘက်ကမှ လိုက်ပြီး ပြောတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လူပြိန်းတွေတောင် နားလည် နိုင်တဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကို အရင်ဆုံး လုပ်တာဟာ အကောင်းဆုံးနဲ့ သဘာဝ ကျပါတယ်။ အပစ်အခတ် မရပ်စဲ သေးဘဲ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကြပြီ ဆိုပါတော့ ... ။ သေနတ်သံ ၊ ဗုံးသံ တွေကြားမှာ နောက်ကြောက လုံပါ့မလား .... ? ။ ကိုယ်စားလှယ်တွေ သွားရေး - ပြန်ရေး ကရော စိတ်အေး နိုင်ပါ့မလား .... ? ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့် အမြင်ကတော့ အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှု ရရှိအောင် အရင်ဆုံး နှစ်ဖက်စလုံးက အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကို ဦးစားပေး လုပ်သင့်တယ်လို့ ပြည်ချစ်သားက မြင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က ငြိမ်းချမ်းရေး တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲရဲ့ ရည်မှန်းချက်က ပစ်သံ ၊ ခတ်သံတွေ မကြားရတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိဖို့ပဲ မဟုတ်လား .... ။ ဒါနဲ့များတောင် KIO က အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကို အရင်ဦးဆုံး မလုပ်ဘဲ ၊ မရွေးချယ်ဘဲ နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေး နေချင် ရတာလဲ ... ? ဘယ်လို ရည်ရွယ်ချက် တွေများ ရှိနေလို့ ပါသလဲ ...... ? ။
အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက် ယနေ့ နံနက် ၈ နာရီ ကျော်ခန့်အချိန်မှစတင်ကာ ရမ်းဗြဲမြို့နယ်၊ ကျောက်နီမော် တိုက်နယ်ရှိ ရခိုင်များသည် ရွာပြင်သို့ထွက်ပြီး စုရုံးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာ ယင်းအချိန်တွင် ဘင်္ဂလီများနေ ထိုင် သည့်ကျောက် ထရံကျေးရွာတွင် တပ်စဲထားသည့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ် ခြင်းကြောင့် ရခိုင်လူမျိုး တစ်ဦး သေဆုံးပြီး တစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိပါခဲ့ပါသည်။
ရာသီအကူးအပြောင်းကာလကို ရောက်လာတဲ့အတွက် တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ် ဗန်းမော်ခရိုင်းအတွင်းက ကချင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ နေထိုင်တဲ့ ကလေးနဲ့ သက်ကြီးရွယ်အို ဒုက္ခသည်တွေဟာ နွေးနွေးထွေး ထွေး နေထိုင်နိုင်ဖို့ အ၀တ်အထည်နဲ့ ခြုံစရာစောင်တွေ လိုအပ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၆ လလောက်က ပေးထားခဲ့တဲ့ စောင်တွေဟာ စုတ်ပြဲလာပြီးတော့ ရာသီအကူးအပြောင်းမှာ ဒုက္ခသည် တွေအတွက် စောင်နဲ့ အနွေးထည်တွေ လိုအပ်တယ်လို့ ဒုက္ခသည်တွေကို အကူအညီပေးနေတဲ့ ၀ိန်ပေါင်နိန်းထွဲး အဖွဲ့က တာဝန်ခံ ဒေါ်မယ်ရီတွမ်က ပြောပါတယ်။
KIA တပ်ရင်း (၁၄) မှ ရွှေမှော်များတွင် ဆန်တစ်အိတ် (၅၀၀၀) နှုန်းကောက်ခံ
KIA တပ်မဟာ (၂) တပ်ရင်း (၁၄) မှ ဗိုလ်ကြီး ဂွန်နော် ဦးစီးအင်အား (၃၀) ခန့်ဟာ ဖားကန့်မြို့နယ် လ၀ါး ကျေးရွာတွင် ရောက်ရှိနေပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ နန့်ခန်းချောင်းတ၀ိုက်မှ ဂျာဝမ်ရွှေမှော်နှင့် လော့ဂျာရွှေမှော်သို့ ဆန်နှင့် စက်သုံးဆီ အ၀င်အထွက်များအပေါ် အောက်တိုဘာလ(၂၉) ရက်က ဆက်ကြေးငွေ ကောက်ခံခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
သမ္မတ အိုဘားမားက Sandy Hurricane မုန်တိုင်းဒဏ် အထိနာခဲ့တဲ့ New Jersey ပြည်နယ်ကို ဒီနေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ သွားရောက်ပြီး ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ အတူ အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေး ၀န်ထမ်းတွေကို ကျေးဇူးတင်စကား ပြောဆိုဖို့ ရှိပါတယ်။အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အရှေ့ဘက် ကမ်းရိုးတန်းမှာ အင်အားပြင်းတဲ့ ဆန်ဒီဟာ ရီကိန်း မုန်တိုင်း ၀င်ရောက် မွှေနှောက် သွားတဲ့အတွက် လူ ၃၂ ယောက်ထက်မနည်း သေဆုံးပြီး သန်းနဲ့ချီတဲ့ လူထု လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင် နေရပါတယ်။
မုန်တိုင်းဒဏ် အကြီးအကျယ် ခံလိုက်ရတဲ့ နယူးယောက်ပြည်နယ်ကိုတော့ သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ဆိုးကို ရင်ဆိုင်ရတဲ့ ဒေသအဖြစ်နဲ့လည်း သမ္မတ ဘရက်ခ် အိုဘားမားက ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။ မုန်တိုင်းကြောင့် နယူးယောက်မြို့ အနိမ့်ပိုင်း မှာရှိတဲ့ လမ်းတွေ အပါအ၀င် နေရာ အတော်များများမှာ ရေမြှုပ်ခဲ့ပြီး မီးတွေလည်း ပျက်ခဲ့ပါတယ်။
ဆန်ဒီဟာရီကိန်း မုန်တိုင်းဟာ နယူးယောက်မြို့ တောင်ဘက်ကို တနင်္လာနေ့ ညပိုင်းက လေတိုက်နှုန်း ပြင်းအား ၁၂၅ မိုင်နှုန်းနဲ့ ၀င်ရောက် တိုက်ခတ် ခဲ့တာဖြစ်ပြီး မုန်တိုင်းကြောင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ လူဦးရေ အထူထပ်ဆုံး ဒေသတွေ ထဲက တခုဖြစ်တဲ့ အရှေ့မြောက်ဘက် အခြမ်းမှာ လေပြင်း တိုတ်ခတ်ပြီး၊ မိုးသည်း ထန်စွာ ရွာသွန်းခဲ့သလို၊ ပင်လယ်ထဲမှာလည်း အန္တရာယ် ဖြစ်စေတဲ့ လှိုင်း လုံးကြီးတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ရခိုင်အရေး မြန်မာသံတမန်ကို ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဌာန ဆင့်ခေါ်
ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဆက်လက်ဖြစ်ပွား နေတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗြိတိန် နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာ သံရုံးရဲ့ သံရုံး ယာယီ တာဝန်ခံကို ဆင့်ခေါ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အကြမ်းဖက် တာတွေနဲ့ ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားတာတွေ နောက်တကြော့ ထပ်ပြီး ဆက်လက် ဖြစ်ပွား နေတာတွေကြောင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံက အလေး အနက် စိတ် အနှောက်အယှက် ဖြစ်ရပါကြောင်း၊ ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေ အဆုံးသတ်ရေး အတွက် အစိုးရအနေနဲ့ အရေးတယူ ဆောင်ရွက်ပါရန် တိုက်တွန်းဖို့ အတွက် မြန်မာသံရုံး ယာယီတာဝန်ခံကို ဆင့်ခေါ်ခဲ့ တာဖြစ် တယ်လို့ နယူးယောက်မြို့ရှိ ကုလ သမဂ္ဂ ဆိုင်ရာ ဗြိတိန် အမြဲတန်း ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ရုံးက အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက် တာပါ။
နန့်မှော်တွင် တိုက်ပွဲဖြစ် KIA ၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အရပ်သားများ သေကြေဒဏ်ရာရ
အောက်တိုဘာလ (၃၀) ရက်နေ့တွင် KIA တပ်များနှင့် အစိုးရတပ်တို့ ဖားကန့်မြို့နယ် နန့်မော်ရွာ အထွက် တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တိုက်ပွဲတွင် KIA ၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ခရီးသွားအရပ်သား (၂)ဦးသေဆုံးပြီး (၃) ဦးဒဏ်ရာရ ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အောက်တိုဘာလ (၃၀) ရက် နေ့လည် (၁) နာရီခန့်တွင် KIA တပ်မဟာ (၂) တပ်ရင်း (၆) မှ အင်အား (၄၀) ခန့်သည် အစိုးရတပ်အား တိုက်ခိုက်ရန် နန့်မှော်ရွာ ကုန်းဆင်းတွင် စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ပြီး အစိုးရ တပ်များ နမ့်မှော်ရွာ တွင်းမှ ထွက်လာစဉ်တွင် စတင် ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး အစိုးရ တပ်မှလည်း လက်နက်ကြီး လက်နက်ငယ်များဖြင့် ပြန်လည် ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ တိုက်ပွဲပြင်း ထန်ခဲ့ကြောင်း သိရပါ တယ်။
နှစ်ဘက်ပစ်ခတ်မှုများမှာ တစ်နာရီးခွဲခန့် ကြာပြီးနောက် KIA တပ်များမှ ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပြီး အဆိုပါ တိုက်ပွဲတွင် KIA ဘက်မှ (၁) ယောက်ကျဆုံးခဲ့ကာ (၄) ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံ များက ဆိုပါတယ်။
“ KIA ကကြိုစောင့်နေတာ စစ်တပ်ရွာကထွက်လာတာနဲ့ စပစ်တော့တာပဲ ရွာထဲကိုလည်း လက်နက်ကြီး တွေကျတယ်၊ ရွာသားတွေတော့ မထိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖားကန့်ကနေလာတဲ့ ကားကိုတော့ ထိသွားတယ်။ ကားက တိုက်ပွဲစဖြစ်ချိန်မှာ စစ်တပ်နားမှာရောက်နေတော့ KIA ပစ်တာတွေ မှန်သွားတာ။ ကားပေါ်မှာ လူ (၅) ယောက်ပါတယ်။ နှစ်ယောက်ကတော့ ပွဲချင်းပြီးသေသွားတယ်၊ (၃) ယောက်ကတော့ ဒဏ်ရာရ သွားတယ် ” ဟု နမ့်မှော်ဒေသခံ တစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။
အဆိုပါတိုက်ပွဲတွင် သေဆုံးဒဏ်ရာရသွားသူ ခရီးသည် အရပ်သားများအား စစ်တပ်နှင့် ဒေသခံများမှ ဖားကန့် ပြည်သူ့ ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ အဆိုပါ တိုက်ပွဲတွင် သေဆုံး/ဒဏ်ရာရ သွားခဲ့သူ အရပ်သား ခရီးသွားများအနက်မှ မှ စစ်ကိုင်းတိုင်း ယင်းမာပင်မြို့နေသူ မဆွေဆွေအောင် (၂၅) နှစ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးမြို့ နေသူ မောင်ကျော်ကျော်တို့ (၂) ဦးမှာ နေရာတွင်ပင် သေဆုံးခဲ့ပြီး မောင်စိုင်းစိုင်းအောင်၊ မောင်ထွန်းမင်း အောင်နှင့် မမြင့်မြင့်ခိုင်တို့ သုံးဦးမှာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ဖားကန့် ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှု ခံယူလျက်ရှိကြောင်း ဖားကန့်ဆေးရုံမှ ဆရာဝန်တစ်ဦးက အတည်ပြု ပြောကြား ပါတယ် သိရ ပါတယ်။
ထိုသို့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွား နေချိန်တွင် မြန်မာ အစိုး ရငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီနှင့် KIO ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်တို့သည် တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နေပြီး ၎င်းဆွေးနွေး ပွဲတွင် KIA ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော် မတက်ရောက်သဖြင့် စစ်ရေးဆိုင်ရာများ ဆွေးနွေး နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ ကြောင်း သိရပါတယ်။